Izindlela ezi-5 zokubulala umncintiswano wakho nokuqukethwe | Martech Zone
Izindlela ezi-5 zokubulala umncintiswano wakho nokuqukethwe
Lwesibili, Disemba 28, 2010 NgeSonto, uJanuwari 19, 2014 Douglas Karr
Umuntu othile ubuze I-Quora uma ibhulogi yabo ingancintisana engxenyeni egcwele kakhulu ye-blogosphere. Umbuzo ubumuhle kakhulu ukuthi ungawuphendula lapho… bengifuna ukwabelana ngempendulo yami nani nonke.
Vele bangancintisana! Okuqukethwe okukhulu izohlala njalo inyukela phezulu, noma ngabe isikhala sigcwele kangakanani. Izindlela ezahlukahlukene ongazisebenzisa yilezi:
Shesha - Uma uyisayithi lokuqala noma ibhulogi ukuze uthwebule isihloko kaninginingi, uzobona okuningi.
Yiba phezulu - Ukuqonda usesho nomthelela wakho kokuqukethwe kwakho kuzokusiza ukuqoqa ithrafikhi yenjini yokusesha.
Yiba nomphakathi - Sebenzisa imithombo yezokuxhumana ukukhulisa ibhulogi yakho futhi uhlanganise imithombo yezokuxhumana kubhulogi yakho ukuze abanye bakukhulisele yona. Izinkinobho zokwabelana, izinkinobho ze-retweet nezimemezelo ku-Twitter, Facebook naku-LinkedIn kufanele.
Yiba ophawulekayo - Uma kukhona ongakhuluma ngakho kubhulogi yakho, abantu bazokhuluma bese kuza abantu abaningi.
Ungaguquguquki - Ukubhala okuqukethwe nokukhula kokufunda kudinga umfutho nokwenziwa njalo. Ungacabangi ukuthi okuthunyelwe okuhle okukodwa kuzokwenzela wena ... konke okuthunyelwe kungeza inani ngokwengeziwe.
Okuqukethwe okuhle kuzohlala kuphuphuma phezulu… nokusebenzisa ngokuphelele wonke amathuluzi wokukhuthaza okuqukethwe kwakho futhi ukwenze kutholakale kalula kuyisihluthulelo ngokuphelele.
Tags: Ama-Analyticsibhodi lokukhohlisaimiphumela yebhizinisiukumakethaizinkomfa zokusesha
Sibheka Amathuluzi Esingawasebenzisa Kuphela
Ama-Autoupdates Ahluleka Ku-WordPress? Ukuhluleka kwe-FTP?
Umthethosivivinywa Wosizo Olukhulu
Dec 29, 2010 ngo-1: 43 PM
Angikwazi ukuvumelana kakhulu nalawo maphuzu ama-5. Kulula, kepha akulula. Yilokho kuphela ukubuyela kwami ​​emuva. Ukwenza konke okungu-5 kuzodinga utshalomali olunzulu. Iningi lohlu limane lifaka imali ebalulekile yesikhathi (ungasho ukuthi alifaneleki), kepha # 4 uhlobo oluthile lwento. “Ukugqama” akuveli nje ngoba ubeka isikhathi esiningi, noma kungaguquguquki, umuntu angacabanga kanjalo, ngokwezibalo kukhulisa amathuba okuthi ukhiqize okuthile okuphawulekayo. Ngingaqagela ukuthi wena, uDoug, ungenza icala lokuqonda okunenjongo ngokwengeziwe ngokuthi "ukuphawuleka."
Futhi ngiqambe amanga, nginenye i-push back.
Kwesinye isikhathi Okuqukethwe Okuhle kukhuphukela phezulu. Ngokwengxenye enkulu, ngaphandle kwecebo lokuphromotha noma lokumaketha ngamabomu, Okuqukethwe Okukhulu kungenzeka kuphile ekusithekeni nasekungabonakali kwenjini yokusesha. Unalokho engqondweni ngiphakamisa umbono ohluke kancane kokuthunyelwe kwakho. Umzamo Omkhulu uzovumela umuntu ukuthi ancintisane emakethe eminyene online (imibono noma imikhiqizo). Okuqukethwe okuhle kuzokwenza kube lula kangako.
Dec 30, 2010 ku-11: 33 AM
Angikwazanga ukuvuma okuningi! Okuqukethwe okuhle kungaba yinzuzo enkulu emizamweni yakho yokumaketha. Uma sekubhaliwe, kufanele usebenzise zonke iziteshi ukuze uphinde uzisebenzise futhi uzulazule esikhaleni esiku-inthanethi.
Jan 4, 2011 ngo-5: 10 PM
Okuthunyelwe okuhle uDoug! Ngivumelana noMthethosivivinywa Wosizo Olukhulu - ngaphandle kohlobo oluthile lwamasu okubandakanya, okuqukethwe kumane kuhlale kulindwe ukutholakala. Ukuthenga okuhle kuthathe lokhu kwangena ezingeni elisha, hlola le ndaba kusuka ku-Ad Age: http://adage.com/article?article_id=147956
Siyabonga ngayo yonke i-Awesome Doug, sidinga ukuyithola kungekudala!
UMongameli / i-CEO